Buyzụta Ndị nrụpụta Immunoglobulin G (IgG) - Chemical Chemicals
Inwe immunoglobulins pere mpe n’ime ọbara gị na-enye gị ohere ka ukwuu ibute ọrịa. Inwe ọtụtụ nwere ike ……….
Immunoglobulin G (IgG) vidiyo
Ọgwụ nje bụ ihe nchebe nke mkpụrụ ndụ gị na-alụ ọgụ iji lụsoo nje, nje, na ihe ndị ọzọ na-emebi agha.
Inwe immunoglobulins dị ntakịrị n'ime ọbara gị na-enye gị ohere ka ukwuu nke ịnweta ọrịa. Inwe ọtụtụ nwere ike ịpụta na ị nwere nfụkasị ma ọ bụ sistemụ mgbochi.
Immunoglobulins na-ejikọ, na-amata ma na-ebibi nje, nsí, nje na nje ndị ọzọ. Ahụ́ mmadụ na-emepụta ọgwụ mgbochi iji lụso antigens. Ọzọkwa, oge ọzọ antigen batara n’ahụ, ọ na-akpali imepụta ụdị ọgwụ mgbochi ọgwụ ndị yiri ya.
Ihe dị mkpa immunoglobulins bụ isi iji ghọta ihe kpatara mgbakwunye bovine colostrum nwere ike bụrụ ihe dị mkpa maka ahụike mmadụ. E gosipụtara Immunoglobulins na ngwa ọgụ ndị ọzọ na-arụ ọrụ na colostrum bovine iji nyere aka belata ihe ize ndụ nke ọnọdụ autoimmune, ọrịa na ọrịa idiopathic (ihe a na-amaghị), gụnyere: Chicken pox pat Hepatitis ， Ọrịa.
Diọk, nke bovine colostrum nwere otutu immunoglobulins di iche iche: IgA, IgG, IgM, IgE, IgD
immunoglobulin g (IgG): Ejiri ya maka nsogbu ọgụ na ọrịa. Bostine colostrum nwere IgG karia karịa immunoglobulin ndị ọzọ.
Gịnị bụ IgG?
Ihe na-alụso ọrịa ọgụ bụ ihe ndị bụ isi na-egbochi mgbochi. IgG bụ ụdị ọgwụ mgbochi dị n'ọbara na extracellular fluid, na-enye ya ohere ịchịkwa ọrịa nke anụ ahụ. Site na ijikọta ọtụtụ ụdị nje dị ka nje virus, nje bacteria, na ero, IgG na-echebe ahụ pụọ na ọrịa. Ihe ndị a na-echebe gị pụọ n’ibute ọrịa “icheta” nje ndị ị hụburu.
IgG ọkwa dị elu, ọkwa IgG serum Igwe na-erughị 200 mg / dL, ọkwa IgM na IgA erughị 20 mg / dL. Ọkpụkpụ ọbara CD19 + B-cell na-abụkarị obere 0.1%.
IgG bụ naanị immunoglobulin mmadụ gafere n’aka nne rue nwa ebu n’uche nyefe ihe mgbochi.
Gini bu akara nke erughi IgG?
Ndị nwere IgG enweghị nsogbu yikarịrị ka ha ga-ebute ọrịa. IgG erughi Igwe nwere ike ime n’oge ọ bụla.
Nnwale ọbara nke na-atụle ọkwa immunoglobulin bụ ihe mbụ na-achọpụta nhụjuanya IgG. Nnukwu ihe mgbagwoju anya mana ule dị oke mkpa gụnyere mmụba nke ọkwa antibody na nzaghachi maka ọgwụ mgbochi ụfọdụ.
Ọrịa ndị na - akacha emetụta ndị nwere nsogbu IgG bụ:
Ọrịa Sinus na ọrịa iku ume ndị ọzọ
Ọrịa na-ebute akpịrị mgbu
N’oge na-adịghị anya, nnukwu ọrịa na-efe efe
Somefọdụ ndị mmadụ, ọrịa na-ebute ihie nke na-emebi oghere maịị na ọrụ nkuume. Nke a nwere ike imetụta iku ume. Ndị nwere IgG na-achọpụta na-apụtakarị ọrịa oyi na ọgwụ mgbochi anaghị egbochi ha ibute ọrịa ndị a.
IgG Powder uru
IgG Powder bụ ihe dị ọcha, mmiri ara ehi nke immunoglobulin G (IgG) dị ka mgbakwunye nri. Usoro IgG dị ọcha na-enyere aka ịnọgide na-enwe sistemụ nsị anụ ahụ dị mma site na ijikọ ọtụtụ ụmụ nje na nsí n'ime gut lumen.
IgG ntụ ntụ na-enye Immunoglobulins na-abụghị Allergenic ka ịbawanye ọgụ mgbochi nke Mucosal
IgG ntụ ntụ na-enyere aka ịnọgide na-enwe Balangụ Malabi
IgG ntụ ntụ na-akwado GI Barrier Health na Iguzosi Ike n'Ezi Ihe
IgG ntụ ntụ na-enyere aka ịnọgide na-enwe Balance Nkịtị
IgG ntụ ntụ na-enyere mmadụ aka ịhazi ma nọgide na-arụ ọrụ ahụ ike.
IgG ntụ ntụ na-enyere aka ịlụso nje ọgụ: Immunoglobulins nwere ike inye aka belata ihe ize ndụ nke nje na-emerụ ahụ na-akpata, si otú ahụ na-egbochi ma ọ bụ na-ebelata ụfọdụ nsogbu ahụike.
IgG ntụ ntụ ojiji na ngwa
Ọ bụ ezie na mmeju immunoglobulin abụghị ụdị a na-ahụkarị na ahịa, enwere ngwaahịa na-asọmpi. Nlele anya maka ahịa immunoglobulin na-ele anya dị mma.
Nchọpụta egosila na lgG nwere ike rụọ ọrụ ma gbochie microorganisms dị na eriri afọ. Costrum abụghị naanị lgG nwere oke, kamakwa ọtụtụ ihe nwere ike ịba uru sistem ahụ.
IgG ntụ ntụ agbakwunyere ọgwụ immunoglobulins iji kwalite mgbochi mucosal, na-akpali usoro mmezi ọ na-adị ma na-enyere aka ịnọgide na-enwe microbial.
IgG na Fcγ Receptors na intestinal Immunity na Inflammation Tomas Castro-Dopico, Menna R. Clatworthy Front Immunol. 2019
Mgbakwunye ogige nwere ike ịkpalite akọwapụtara, T cell-based, autoanti-IgG antibody Production na ụmụ oke J Exp Med. 1985 Jan 1
Ndị nọchiri anya ọgwụ immunoglobulins M, E, A, na G nọ n'ọmụmụ, nke mbụ, na nke abụọ bụ ọrịa cytomegalovirus nke nyochare site na njigide mgbochi immutosorbent enzyme. SL Nielsen, M Sørensen, HK Andersen J Clin Microbiol. 1988 Apr; 26 (4): 654–661.
Mmetụta nri atọ a na-eri na mbugharị nnabata nke mgbochi na preweaning ahụike na Calves na kọmpụta California na-agbaso Ọzụzụ nchịkwa ColostrumDeniece R. Williams, Patrick Pithua, Angel Garcia, John Champagne, Deborah M. Haines, Sharif S. Aly Vet Med Int. Afọ 2014; 2014: 698741
Nyochaa nsonaazụ nke ọkụ ultraviolet na nje nke nje nje n'ime mmiri ara ehi na colostrum, yana na colostrum immunoglobulin G V. Pereira, ML Bicalho, VS Machado, S. Lima, AG Teixeira, LD Warnick, RC Bicalho J Dairy Sci. Akwụkwọ edemede; dị na PMC 2015 M